नेप्सेमा दोहोरो अंकको सुधार, कुन कम्पनीले कति कमायो ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ नेप्सेमा दोहोरो अंकको सुधार, कुन कम्पनीले कति कमायो ?
नेप्सेमा दोहोरो अंकको सुधार, कुन कम्पनीले कति कमायो ?
धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज सुधार देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अंकले बढेको छ । नेप्सेका अनुसार नेप्सेमा १३.५० ले वृद्धि भई एक हजार २६९.३० मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक समेत २.०३ ले बढेर २७३.८२ मा पुगेको छ ।
नेप्सेको उकालो यात्रासँगै कारोबार रकम समेत बढेर झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । कूल १७३ कम्पनीको ५१ लाख ६ हजार ६८१ कित्ता सेयर एक अर्ब ९० करोड ३१ लाख ४२ हजार आठ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये आज पाँच उपसमूहको सेयर घटेको छ भने सात उपसमूहको सेयर बढेको छ ।
बैंकिङ १३ं६५, जलविद्युत् ९.१६, निर्जीवन बिमा ७७.३२, अन्य ५.६५, लघुवित्त २०.५९, जीवन बिमा १४०.५ र सामूहिक लगानी कोष ०.०१ ले वृद्धि भएको छ । यस्तै, व्यापार १.३६, होटल ४.८१, विकास बैंक ३.२७, वित्त ६.५४ र उत्पादन २.२ ले बढेको छ ।
कारोबारका आधारमा आज हिमालयन डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको कूल ३१ करोड ३३ लाख पाँच हजार ४८७ रूपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ११ करोड ३१ लाख ७७ हजार ९३८, एनआइसी एशिया बैंक नौ करोड ६५ लाख ४२ हजार ५६३, एनएमबी बैंक सात करोड १८ लाख ५७ हजार २९९, नेपाल बैंक लिमिटेड चार करोड ९२ लाख ५२ हजार ८०३ र प्रभु बैंकको चार करोड ८४ लाख ३१ हजार ५३० रूपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
नेप्सेका अनुसार जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको सेयर कारोबारका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.९६ प्रतिशतले कमाए । यस्तै, राधी विद्युत् कम्पनी ९.५५, एनसिसी बैंक ६.७४, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक ६.०६, माउण्टेन हाइड्रो ६.०२ र एनआबीएल एक समृद्धि फण्डका लगानीकर्ताले ५.८८ प्रतिशतले कमाए ।
पछिल्लाे - कोरोना जोखिम : वेपर्वाह सर्वसाधारण
अघिल्लाे - प्रतिनिधिसभा बैठक चैत १३ सम्म स्थगित